डिपिएलको खेलाडी ‘अक्सन’ सकियाे, कुन खेलाडी कसकाे टिममा ?
आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुभाष शाहीले यही पुस १७ गतेसम्मको समयभित्र प्रतियोगिताका लागि दर्ता भएका २०५ खेलाडीबीच हाेटल अन्नपूर्ण अक्सन जारी
काठमाडाैं, २१ पुस । तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको खेलाडी खरिद बिक्री (अक्सन) सकिएकाे छ ।
आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुभाष शाहीले यही पुस १७ गतेसम्मको समयभित्र प्रतियोगिताका लागि दर्ता भएका २०५ खेलाडीबीच हाेटल अन्नपूर्ण अक्सन सकिएकाे जानकारी दिए ।
यही पुस ४ गतेदेखि खुलेको खेलाडी दर्ता गत मङ्गलबारसम्मका लागि तोकिएको थियो । यस पटक खेलाडीको वर्गीकरण गरिएको छैन । खेलाडीले न्यूनतम मूल्य रु ३० हजारदेखि रु दुई लाख ५० हजारसम्म राखेर नाम दर्ता गराएका थिए । जसअनुसार प्रतियोगितामा सहभागी टोलीले खेलाडी किनेका छन् ।
कुन खेलाडी कसकाे टिममा ?
कुशल भुर्तेल- १ लाख ६० हजार
अर्जुन अधिकारी- ३० हजार
किशोर महतो- १ लाख
मोहम्मद सांम्सद शेख- ७५ हजार
राजेश पुलामी मगर- ७५ हजार
मोहम्मद आसिफ शेख- १ हजार ८० हजार
पृथु बास्कोटा- १ लाख २० हजार
हरिशंकर शाह- ९० हजार
सुशान भारी- १ लाख
अमृत गुरुङ- ३० हजार
तृत्तराज दास-३० हजार
सुवास ऐर - ट्यालेन्ट हन्ट
अविनाश बोहरा- १ लाख ७० हजार
आरिफ सेख- २ लाख ५० हजार
अमरसिंह रौटेला- १ लाख २० हजार
सागर ढकाल- १ लाख
दीपेन्द्र चन्द- ३० हजार
दीलिप नाथ- ७५ हजार
रोहित पौडेल- २ लाख ३० हजार
सहाब आलम- ६० हजार
सन्तोष भट्ट- ३० हजार
सिद्धान्त लोहनी- ७० हजार
कुशल मल्ल- ५० हजार
सुशिल खड्का- ३० हजार
दीपेश श्रेष्ठ- ८० हजार
सौरभ खनाल- १ लाख ६० हजार
विपिन खत्री- ९५ हजार
हरिबहादुर चौहान- ९५ हजार
अमित श्रेष्ठ- १ लाख ८० हजार
राजु रिजाल- ७५ हजार
रोविन क्षेत्री- ३५ हजार
सुनिल धमला- १ लाख ८० हजार
पवन सर्राफ- २ लाख ५० हजार
धिरज शाही- ३० हजार
कृष्ण ऐर- ट्यालेन्ट हन्ट
ललितसिंह भण्डारी - २ लाख ५० हजार
प्रदीप ऐरी - २ लाख ४० हजार
पुरन विक - ४० हजार
सन्दीप सुनार - १ लाख १० हजार
अनिल खरेल- ३० हजार
सुमित महर्जन- ७५ हजार
विनोद भण्डारी- २ लाख ५० हजार
कृष्ण कार्की- १ लाख
सुरज दराई- ३० हजार
भीम सार्की- २ लाख ५० हजार
शेर मल्ल- ३० हजार
विक्रम भुषाल- १ लाख ६० हजार
अविनव यादव- ३० हजार
रासिद खान- १ लाख ७० हजार
ललितनारायण राजवंशी- २ लाख ५० हजार
नन्दन यादव- ५० हजार
अनिलकुमार साह- १ लाख ७० हजार
सोनु तामाङ - ६५ हजार
सुर्य तामाङ- ५० हजार
योगेन्द्रसिंह कार्की- ७० हजार
जितेन्द्रसिंह ठकुरी- ७५ हजार
भुवन कार्की - २ लाख १० हजार
दीपेन्द्र रावत- ३० हजार
प्रेम तामाङ- ५० हजार
आदिल अन्सारी- ३० हजार
रामनरेश गिरी- ७५ हजार
सन्दीप जोरा- २ लाख ३० हजार
खगेन्द्र जोशी- ३० हजार
सुवेन्दु पाण्डे- ५० हजार
रित गौतम- ३० हजार
ज्ञानेन्द्र कुँवर- ट्यालेन्ट हन्ट
रोउण्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगितामा सबै टोलीमा दुई–दुई विदेशी खेलाडी अनिवार्य गरिएको छ । देशकै सर्वाधिक ठूलो धनराशि पुरस्कारको क्रिकेट प्रतियोगिताका रुपमा २०७३ र २०७४ सालमा डिपिएलको पहिलो र दोस्रो संस्करण भएको थियो । दुवै संस्करणको उपाधि टिम चौराह धनगढीले जितेको थियो ।